Izithako ezidumileyo, iMicroencapsulation, iNkxaso kwi-Immune-Finutra
IFinutra inikezela ukuba ngumthengisi odibeneyo wonikezelo lonikezelo lwehlabathi, sinika uluhlu olubanzi lwezixhobo kunye nezinto ezisebenzayo njengomvelisi, umhambisi kunye nomthengisi weSiselo sehlabathi, iNutraceutical, Ukutya, ukutya kunye noMzi mveliso weCosmeceutical. Umgangatho, ukumiliselwa kunye nokulandelelwa ziintsika ezixhasa isiseko solwakhiwo kunye neenjongo. Ukusuka kwisicwangciso sokwenza, ukulawula, ukuvala kunye nengxelo, iinkqubo zethu zichazwe ngokucacileyo phantsi kwemigangatho ephezulu yeshishini.
Iimveliso zethu ezifakiwe
I-Melatonin 99% ye-USP esemgangathweni
I-5-HTP 99% i-Peak X yasimahla yeSolvent Solvent
Ingcambu yeTurmeric Extract Curcumin Powder
Imisebenzi yokuvelisa i-aseptic ngokuhambelana ngokungqongqo nemigangatho ye-GMP. Ilebhu yovavanyo esembindini ifakwe ukufunxwa kweathom, isigaba segesi kunye nenqanaba lolwelo. Amanqaku olawulo abalulekileyo avavanyiwe kwiindawo ezisisigxina kunye nesampulu ngokungacwangciswanga, ke ngoko ukuqinisekisa ukuba ibhetshi nganye yeemveliso ingaphaya kokulindelwe ngabathengi. Kwimveliso kunye nokusebenza, uFinuta uhlala elandela umgaqo "wokuphucula imeko yendalo kunye nempilo yabantu", ulawula ngokungqongqo umgangatho, kwaye uzama ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezingcono kubanikezeli behlabathi.
I-Tribulus terrestris (yosapho iZygophyllaceae) sisityalo esirhubuluzayo sonyaka esasasazeka e-China, empuma ye-Asiya, kwaye siya kufikelela kwintshona ye-Asiya nakwintshona yeYurophu. Iziqhamo zesi sityalo zisetyenzisiwe kunyango lwesiTshayina lwesiNtu kunyango lwengxaki yamehlo, i-edema, isisu esiswini, uxinzelelo oluphezulu lwegazi, kunye nezifo zentliziyo ngelixa e-India ukusetyenziswa kwayo e-Ayurveda kwakusenzelwa ukungabi namandla, ukungakuthandi ukutya, i-jaundice, ukuphazamiseka kwe-urogenital, kunye nezifo zentliziyo. Tr ...
Isicatshulwa seValerian-Extract-Valerenic-Acid-Herbal-Extract -...
IValeriana officinalis sisityalo, esidla ngokubizwa ngokuba yi-valerian. Ngokwesiko, iingcambu ze-valerian zenziwa zenzelwe iti okanye zityiwe ngenjongo yokuphumla kunye nokuhlala. IValerian icingelwa ukuba ikhulisa ukutyikitywa kwesinye sezona zinto ziphambili zokuthambisa, i-gamma-aminobutyric acid (GABA). Ukusetyenziswa okuphambili kweValerian kukuthomalalisa uxinzelelo okanye ukwenza kube lula ukulala. Igama leMveliso: Umthombo weValerian Extract: IValerian Officinalis L. Icandelo elisetyenzisiweyo: Ingcambu yeSelvent: Amanzi kunye ...
I-L-Theanine yi-amino acid efumaneka kwiintlobo ngeentlobo zezityalo kunye nakwiintlobo zamakhowa, kwaye ikakhulu ininzi kwiti eluhlaza. I-L-Theanine ihlala ibizwa ngokuba yi-Theanine ngokulula, ukuze ingabhidaniswa ne-D-Theanine. I-L-Theanine ineprofayili ekhethekileyo enencasa, eyomileyo ye-umami kwaye ihlala isetyenziselwa ukunciphisa ubukrakra kukutya okuthile. Izibonelelo ze-L-Theanine L-Theanine inokuba neziphumo zokuthomalalisa imood kunye nokulala kwaye inokuxhasa ukusebenza kwengqondo kunye nokunceda ukuphaphama, ukugxila, ukuqonda kunye nenkumbulo ...
IDiosmin yikhemikhali kwezinye izityalo. Itholakala ikakhulu kwiziqhamo zesitrasi. Isetyenziselwa ukunyanga ukuphazamiseka okungafaniyo kwemithambo yegazi kubandakanya hemorrhoids, varicose veins, ukuhamba gwenxa emilenzeni (venous stasis), kunye nokopha (ukopha) kwiliso okanye kwiintsini. Ihlala ithathwa ngokudityaniswa ne-hesperidin. Igama leMveliso: Umthombo weDiosmin: ICitrus Aurantium L. Icandelo elisetyenzisiweyo: Isisombululo esingafakwanga kwisiQinisekiso: I-Ethanol kunye naManzi ayisiyi-GMO, i-BSE / TSE yasimahla yokuNkcenkceshela, i-Allergen F ...
Imvelaphi: Centella asiatica L. Iyonke iTriterpenes 40% 70% 80% 95% Asiaticoside 10% -90% / Asiatic Acid 95% Madecassoside 80% 90% 95% / Madecassic Acid 95% Intshayelelo: Centella Asiatica, eyaziwa njenge-Asiatic pennywort okanye I-Gotu kola, sisityalo esine-herbaceous, frost-tender esingagungqiyo kwindawo yemigxobhozo e-Asiya. Isetyenziswa njenge mifuno yokupheka kunye nonyango lwamayeza. I-Centella asiatica ixhaphake kakhulu njengesixhobo esincedisayo sokuqonda kunye nezinye izibonelelo zempilo yentliziyo (kwi ...
Huperzine A Powder 1% 98% Chinese Herbal Medici ...
IHuperzine-A yinkomfa ekhishwe kwimifuno yosapho lakwaHuperziceae. Yaziwa ngokuba yi-acetylcholinesterase inhibitor, ethetha ukuba iyeka i-enzyme ukuba ingaphuli i-acetylcholine ekhokelela ekunyukeni kwe-acetylcholine. IHuperzine-A ibonakala ngathi yindawo ekhuselekileyo evela kwizifundo zezilwanyana zetyhefu kunye nezifundo ebantwini ezingabonisi ziphumo zecala kwiidosi ezongezelelwa rhoqo. IHuperzine-A ikwizilingo zokuqala zokusetyenziswa ekulweni isifo se-Alzheimer ngokunjalo, ...
Phosphatidylserine yeembotyi zesoya Caphula Powder 50% N ...
I-Phosphatidylserine, okanye i-PS, yinkompo efana nokutya okunamafutha okuxhaphake kakhulu kwizicwili zomntu. Inokudityaniswa kunye nokusetyenziswa ngokutya, kodwa ezinye izibonelelo zinokufunyanwa ngokuxhasa. Inokuxhasa ukusebenza kwengqondo kunye nokukhuthaza imeko esempilweni kunye nokunceda ukuqonda, inkumbulo, kunye nokugxila. Inokukunceda kunyamezelo lweembaleki kunye nokuzilolonga kwakhona. -Uxhasa ukusebenza kwengqondo; -Ukukhuthaza imo esempilweni; -Ukuqonda ingculaza; -Nceda imemori; -Isebenza ukunceda ukugxila; -...
I-CoQ10 yimixube efana nevithamini eveliswayo emzimbeni ukuze isebenze kakuhle kwimitochondria, kwaye ikwayinxalenye yokutya. Inceda i-mitochondria ngexesha lokuveliswa kwamandla kwaye iyinxalenye yenkqubo ye-antioxidant engapheliyo. Iyafana nezinye iikhompawundi zepseudovitamin kuba ibalulekile ekusindeni, kodwa akufuneki ukuba ithathwe njengesongezelelo. Nangona kunjalo, kukho ukubakho kokunqongophala ngenxa yokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ukuthatha ii-statins, izifo ezahlukeneyo zithi, ...